I-SpotOn kunye ne-Poynt: I-POS yeNtengiso eDityanisiweyo yeShishini elincinci | Martech Zone
I-SpotOn kunye ne-Poynt: I-POS yeNtengiso eDityanisiweyo yoShishino oluNcinci
NgoLwesihlanu, Matshi 15, 2019 NgoLwesihlanu, Matshi 15, 2019 Douglas Karr
Ngqo echaphazeni Sele efake ngaphezu kwe-3,000 inqaku lentengiso kunye nezixhobo zokwenza intlawulo kwiindawo zokutyela, abathengisi nakwiisalon kwilizwe liphela. Baye babambisana nabo Ngamandla ukubonelela ngeendawo eziguqukayo zeetheminali zentengiso ezenza ukuba abathengisi kunye nabanini bevenkile yokutyela baqokelele ulwazi lokunxibelelana nabathengi kwaye bamkele iintlawulo kwikhawuntara, okanye naphi na apho bakhoyo abathengi.
Izixhobo zokuthengisa zePOS
Izixhobo zentengiso zeSpotOn zenza kube lula ukwenza isicwangciso sonxibelelwano esingaguquguqukiyo kunye nabathengi bakho ukuze baya rhoqo kwishishini lakho rhoqo kwaye basebenzise imali eninzi xa besenza. Isiphumo asibobudlelwane kuphela obungcono kunye nabathengi bakho, kodwa inyusa ingeniso kwishishini lakho.
Iimpawu zentengiso yeSpotOn kunye nezixhobo zokunyaniseka kubandakanya ukukwazi:
Ngenisa abathengi abakhoyo kwaye uqhubeke nokukhulisa ngokuqokelela iidilesi zabathengi ezintsha.
Nxibelelana nabathengi bakho nge-imeyile, kuFacebook, kuTwitter, nakwizilumkiso eziphathwayo.
Yenza imiyalezo yokuthengisa ngokukhawuleza nangokulula kunye neqonga lokwakha iphulo.
Thumela abathengi bakho ngokukhawuleza kwexesha ukukhawulezisa utyelelo olutsha.
Amaphulo azenzekelayo okubangela utyelelo oluvela kumacandelo ahlukeneyo abathengi, kubandakanya iindwendwe ezintsha, abathengi bakho, kunye nabathengi abangakhange babatyelele okwethutyana.
I-SpotOn ayenzi lula ukulawulwa kwentengiso, ikwavumela ukuba wenze ifayile ye imivuzo yokunyaniseka Inkqubo, kwaye ulawule eyakho uphononongo kwi-Intanethi. Xa zisetyenziselwa ikhonsathi kunye nenye, ezi zixhobo zokubandakanya abathengi zinika ishishini lakho iqonga elinamandla elidityaniswe ngokupheleleyo nenkqubo yokuphuma kunye nohlalutyo oluqhutywa yidatha.
Oko kuguqulela kukukwazi ukuqhubeka nokukhulisa uluhlu lwabathengi bakho kunye nokuqokelela idatha malunga nabo bathengi. Njengoko iqonga lakho leSpotOn liqokelela idatha ethe kratya, iya kuba namandla ngakumbi, ikuvumela ukuba wenze amaqela amatsha abathengi kunye nokukwazi ukufikelela kubo ngamaphulo okuthengisa afanelekileyo.
Ngaphezulu kwalonto, iqonga ledashboard analytics liya kukuvumela ukuba ubone unxibelelwano olucacileyo phakathi kwabathengi, ukuthengiselana kwabo, kunye nemikhankaso yakho yokuthengisa, ikunike i-ROI ecacileyo kwimigudu yakho yentengiso. Ngamanye amagama, i-SpotOn ithatha uqikelelo kwintengiso. Uyakwazi ngokuthe ngqo ukuba kusebenza ntoni, kunye nendlela yokwenza amaphulo okuthengisa asebenzayo ngakumbi kwixa elizayo.
Malunga neSpotOn Transact, LLC
I-SpotOn Transact, i-LLC ("i-SpotOn") yintlawulo yokusika kunye nenkampani yesoftware echaza umzi mveliso weenkonzo zabarhwebi. I-SpotOn idibanisa ukuhlawulwa kwentlawulo kunye nesoftware yokubandakanya abathengi, inika abathengisi idatha etyebileyo kunye nezixhobo ezibaxhobisayo ukuba bathengise ngokufanelekileyo kubathengi babo. Iqonga leSpotOn libonelela ngezixhobo ezibanzi kakhulu kumashishini amancinci naphakathi, kubandakanya ukuhlawula, ukuthengisa, ukuphononongwa, uhlalutyo kunye nokunyaniseka, exhaswa kukhathalelo lwabathengi abakhokelayo. Ngolwazi oluthe kratya, ndwendwela I-SpotOn.com.
Malunga nePoynt, Inc.
IPoynt liqonga lezorhwebo elixhumeneyo
ukuxhobisa abathengisi ngetekhnoloji yokuguqula amashishini abo. Ngo-2013, inkampani yaqaphela ukungabikho kweeterminal kwiimarike, kwaye yacinga kwakhona i-terminal yokuhlawula yonke into kwisixhobo esixhunyiwe, esineenjongo ezininzi eziqhuba umntu wesithathu
usetyenziso. Njengoko iiterminal smart ziba yinto ephambili, iPoynt OS yinkqubo yokusebenza evulekileyo enokuthi isebenzise nasiphi na isiphelo sentlawulo sentengiso kwihlabathi liphela, isenza uqoqosho lwe-app entsha kubarhwebi kwaye ivumele abaphuhlisi ukuba babhale kube kanye kwaye basasaze kuyo yonke indawo. IPoynt ikwikomkhulu
ePalo Alto, Calif., kunye nekomkhulu lamanye amazwe eSingapore, kwaye ixhaswe ngu-Elavon, uGoogle Ventures, amaQabane eMatrix, iBhanki yeSizwe yaseOstreliya, amaQabane e-NYCA, amaQabane e-Oak HC / FT, iStanford-StartX Fund, kunye neWebb Investment Network. Fumana ngakumbi kwi
tags: usetyenziso lweselulaUkulungiswa kwentlawuloinqaku lentengisoUkuthumela imiyalezoZonke iinkonzo ze-intanethipoynt ubungakananingqo echaphazeni
Douglas Karr Friday, March 15, 2019 Friday, March 15, 2019
Ithemba lokudibanisa iTekhnoloji yeBlockchain kunye ne-Intanethi yezinto
I-Xara: Yenza amaXwebhu okuThengisa aBonakalayo eMizuzu